Madaxweyne-xigeenka la doortay
Masuuliyiintii kale ee halkaa ka hadlay waxa isna ka mid ahaa Guddoomiye-xigeenka 2aad ee Xisbiga KULMIYE Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo hadalladiisii ay ka mid ahaayeen, “Horta wax cusub maaha inay qurba-joogu door wanaagsan ka ciyaaraan Somaliland oo haddaad xusuusan tihiin halgankii la soo galay ee Somaliland lagu abuuray qurba-joogu meel ay joogaanba lafdhabar bay ka ahaayeen. KULMIYE dhaqaale ahaan xisbi baaxadaa lihi muu shaqayn kareen haddaanu taageerada qurba-jooga haysanin aad baanay ugu mahadsan yihiin qurba-joogu.”
Cabdiraxmaan wuxuu baaq u jeediyay Madaxweynaha iyo ku-xigeenka la doortay. “Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaan odhanayaa oo aan ka codsanayaa qaynuunkan odhanaya qof qurba-joog ah oo Baasboor sitaa isma sharixi karo, kaasi waa xaq darree halanaga joojiyo, haddii kale anigu isma soo sharixi karo ileen waxaan doonayaa inaan shanta sano ee dambe isa soo sharaxee.”
Dr. Maxamed Cabdi Gabboose oo ka mid ah Masuuliyiinta KULMIYE oo ka mid ahaa masuuliyiintii halkaa ka hadlay, ayaa la dardaarmay Qurba-joogga ka qayb-galay Munaasibadda. “Waxaan maray Buuraha, waxa marayey qurba-joogga. Waxaan maray Bacadka, waxa marayey shacabka kale oo rag iyo haweenba leh. Markaa ku dheeraan maayo guusha iyo sidii ay ku timi, dalkan waxa horyaala faraxa ka dib, mashaakil fara badan. Dalkani wuxuu sugayaa ictiraaf, caalamka inuu ka helo dhaqaale oo ay u furanto qaddiyadiisu. Dalkan waxa horyaala dhaqaale xumo, waxa horyaala shaqo la’aan, waxa horyaala maamul xumo, dalkani wuxuu u baahan yahay in xooggiinii marayey buuraha iyo bacadka aanu u qaadan in dagaalkii dhamaaday goob dagaal bay ahayde dagaalkii waynaa wuu hadhsan yahay, dal dhis baa loo baahan yahay.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Barigii jabhada aanu ahayn kacdoon shacbi baa jiray oo albaab kasta garaacayey, markaa waxa loo baahan yahay oo albaab walba aad garaacdaan, ictiraafkii raadisaan oo aad ummada u dagaashaan, waxa la idiinka baahan yahay boqol doolar ee aad reerka u soo u diraysaan 2% inaad dalkii kaga tala gashaan oo aad ku caawisaan madaxweynihiina aad maanta doorateen.”
Xidhiidhiyaha Qurba-joogga ee Xisbiga KULMIYE Cismaan Saxardiid oo isna halkaa ka hadlay, ayaa hadalladiisii waxa ka mid ahaa, “Sharaf ayey caawa noo tahay haddii madaxweynaha cusub ee la doortay xafladii ugu horeysay ee uu Somaliland ku qabto ee marti sharaf ah uu u soo gudbiyey qurba-jooga reer S omaliland aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa. Dad badan baa waxay nagu yidhaahdaan qurba-joogaw miyeydaan noqonayn ololihii wuu dhamaadaye, markaa waxaanu leeyahay haddaanu qurba-jooga nahay waanu noqonaynaa. Laakiin anagu qurba-joog ahaan kursi doon ma nihin, waxaana daafaha dunida uga kala nimi waxa weeye danta dadka reer Somaliland si ay cisi iyo sharaf ugu noolaadaan.”
← Kulan dhex maray M/weynayaasha talada la kala wareegaya ee Somaliland & dalab loo gudbiyay Rayaale